UHenna Mehndi udweba umzobo weengcamango zomtshato - Tattoos Art Ideas
sonitattoo Disemba 17, 2016
I tattoo yeHenna enye ye #tattoo abantu abayisebenzisayo ukuba babonakale beyingqayizivele ngenxa yokubaluleka komgcini. Kukho izinto ezingenakongezwa kuzo ukuba zixelele intsingiselo ebalulekileyo okanye ibali. I-henna inamandla kwi-# design and meaning. Unako ukuphuma ngaphandle kwesihlwele xa usebenzisa i tatna tattoo ukwenza loo ngxelo enesibindi ukuba uhlale ufuna ukuxelela ihlabathi kwaye awukwazanga ukwenza oko.
1. Umzekelo weRaja Rani
Le pateni isetyenziswa ngokuqhelekileyo njenge-#bridal mehendi imitshato emininzi. Ukuqulunqwa kwemiboniso yesakhiwo se-raja kunye ne-rani ibonisa ubukumkani bexesha likaMughal. Imifanekiso eyahlukeneyo yenziwa ngokubhekiselele ekugxinineni ubuso bokumkani no-ukumkanikazi
Ngokungafani neendabuko zamasiko ze-mehendi le nto iyahluke. Ngokuqhelekileyo kubandakanya isibini sesibini se-valentine kwiintendelezo ezimbini ezahlukeneyo ezifana ne-Romeo Juliet.
3. Isibonelo seRasasthani
I-mehendi ephelele ngokupheleleyo ukuba uhamba emtshatweni womtshato. Uyilo lwakhona luba ngumtshato ogqityiweyo xa umcimbi womtshato wasebukhosini.
4. Umkhwenyana womyeni uMyeni
Olu luyilo lukhethwa kakhulu phakathi kwePunjabis. Ngokuqhelekileyo bakhetha lo mklamo kubafazi babo. Uyilo lubonisa uthando kunye nobumbano obomini bemiphefumlo emibini.
5. I-Peacock Design
Ukuqulunqwa kweyona nto ikhethiweyo yinto nganye. Olu qulunqo luhlala luba ngumkhangeli ukususela kwiminyaka. Luyilo olugqibeleleyo olubonisa ubufazi.
6. IFloral Bracket Pattern
Uluhlu olungentla luhlobo lwebhokisi lombhobho oluhlaza. Umbala omnyama kunye kunye noyilo oluyinkimbinkimbi wenza ukuba idizayini ihle kakhulu. Ingasetyenziselwa ukuba i-meriddi yomtshato.
Ukucima i-design eyinde kuba ngabaza kuba ngumkhwenkwezi kodwa usenangqungquthela. Ngaphandle koko, iimveliso ezidume kakhulu phakathi kwabafazi. Uyilo lobunzulu olukhethileyo lukhethwe ngabantu abadumileyo. Khuphela oku xa umtshato wakho usondele.
8. IsiGujarati Mehendi
Lo mbhalo ongeyonto engcolileyo ufezekileyo kumtshakazi wesiGujarati. I-henna ibonisa inhlanganisela ye-#aldi ye-peacock kwimilenze kunye nomdaniso we-dandiya ezandleni zombini. Umboniso ocacileyo weenkcubeko kunye nesithethe.
Idizayini ibonisa ukudibanisa kwezinto zokudala ezibonisa ukuba umbuso ukhangele kwi-mehendi. Izindlovu phezulu zidibanisa i-touch up to imperialty.
10. Ifom yaphezulu
Umzobo ophakathi kwintendlela umele u-Radha-Krishna, uhlobo oluphezulu lobuthixo olulandelwa ngumfazi wesibini obonisa ubufazi kunye nepikoko ekupheleni.
11. IziCwangciso zeMveli
Enye yemveli yendalo endala eye yenziwa kwimfashini iminyaka. Iqukethe iziprints ze-paisley, amabakaki, iintyatyambo kunye neengqungquthela.
12. Iintsika Zothando ZeThixo
I-#mehendi epheleleyo ukumela uthando kubathandekayo ngokubhala igama kunye nokucoca kwothando ngomsebenzi waseGanesh phakathi kwentendeni.
Umklamo ogqityiweyo womtshato ongasentshonalanga okanye umtshato ongowokuzalwa waseNdiya owawubanjwe kwiilwandle. Ingumxube okhoyo we-modernism kunye nomgca weepisisiti ze-paisley kunye nokusetyenziswa kwamapikoko kunika ukubonakala kwendabuko.
Ukuqulunqwa kwe-mehendi enobungqingili kukulungele ukutshata kwe-Indian wedding.
15. Umyeni-umyeni wePeacock motifs
Umtshakazi umklamo kunye ne-peacock art yenza ukuba kube ngumtshato oqhelekileyo womtshato waseNdiya.
16. Imifanekiso yePailley
Ukudibanisa okungenasiphako kwemifanekiso engasentshonalanga !! Iintyatyambo zonke phezu kwezandla kunye neengcango zesundu zenza ukuba zilungele umtshato osentshonalanga.
17. Iimpawu zePeacock Curve
Ukuqulunqwa kwe-henna ngokugqithiseleyo kugxininisa iipikoko ezimbini kwizandla ezizungezwe ngeengqungquthela kunye ne-paisley touch.
18. I-Curvy Pattern
Ukuyila ngokubonakalayo kubonakalisa iintendelezo zeentlobo ezahlukeneyo kunye neqela elincane entendeni nasesandleni kunokuba iminwe.
19. I-Peacock Passion
Ukususela entendeni ukuya kwinxalenye ephumayo i-craacock craft craft ngokugqithiseleyo igxininiswe ngepatheni yeepatheni ezintle.
20. I-Bracket Obsession
Imifanekiso yobukrini yintando ephumayo yabo bonke abathandi bam mehendi. Uyilo lonke lujoliswe ekusebenzeni kwekhredithi.
21. I Mixed Pattern
Elingcwele yendabuko mehendi !! I-henna ngumxube wezo zonke izibetho ezivela kwi-design mango, umtshakazi nomyeni kumapikoko kunye nokufakela phezulu komnwe ngamnye.
22. Umzekelo weNdlovu
Yona yintlahlela ye-mehendi eyintandokazi phantse wonke umtshakazi. Uyilo luyinto yokuxuba kweepatheni kunye neepalve zelungileyo ezenziwe kakuhle kwizandla kunye neenyawo.
23. Umzekelo weSimmetrical
Umdiliya wokwakha kunye nomsebenzi wobugcisa beentyatyambo ngumsebenzi olungeleyo wokugqibela wam mehendi.
24. Umzekelo wePaisley
Iifayili ze-pailey zizahlukileyo zemveli. Umzobo unokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo ezinjengeemango ze-mango kunye nezinye izinto ezizenzekelayo.
tatna tattooizithunywa zezulusibinibathanda i tattoostattoiifotto zentamotatto tattoostattoo yamehloi-tattoostattootattoos kumantombazanaiifatyambo zeentyatyamboIintliziyo zeTattoosizigulanetattoostattoo engapheliyoukutshiza amathambotattoos ezinyawotattooscute tattoosi tattootatto flower flowerzinyonitattoos zelangaiifoto eziphakamileyozomculo tattooszengalo zengaloutywala tattootattoo yedayimanii-cherry ityatyambotattoos kubantuiimpawu zezodiac zempawudesign mehnditattoos zohlangatattooiidotiI-Ankle Tattoostattoos zenyangaTattoos zeJometriIndlovu yeendlovuihoi fish tattootattoosiipattoostattoosngesandlaicompass tattooIintyatyambo zeTattooizifuba zesifubangombonoowona mhlobo womhlobo